Okpu agha n'èzí, Okpu agha, Igwe Igwe, Igwe okpu - Igwe dị mkpa
Advanced rụpụta Equipment
ABB 6-aixs robot, kurtz EPS akụrụngwa yana ụlọ ọrụ nyocha Cadex. Ngwunye ihe eji emeputa ihe.
Wuo, SOP na nhazi usoro iji mezuo nke mbu.
Ndị ahịa na-atụkwasị obi, na-atụghị anya ya. Ngwọta kachasị mma ikpu okpu agha.
Tụkwasị obi na ahụmịhe nwere ahụmahụ R & D teay.
Smart akpaka breeki flash mgbaama Ikanam ìhè ọ ...
Igwe okpu igwe V06
Igwe Igwe Igwe V09
Echiche dị elu na Innovation
Njikere inyocha echiche ọhụrụ, imepụta ihe ọhụụ, ihe ọhụrụ na usoro. Si na igbe na-eche echiche, mbọ na-agwụ ike.
Facilitieslọ ọrụ dị elu na ụlọ nyocha nyocha nke onwe
Họrọ ngwa ngwa okpu agha kachasị mma. Facilitylọ ọrụ nyocha nke Cadex dị na ya na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ nyocha ruru eru nwere ike ịme nyocha okpu agha niile n'ụlọ.
N'ime afọ 15 nke ahụmịhe
Smart okpu agha development & rụpụta
Hazie okpu agha mara mma site na enweghị njikọ na ikanam na APP. Nye mgbaàmà ntụgharị, ọkụ breeki, Bluetooth, GPS, Igwefoto, wdg. na-eduga okpu agha nwere ọgụgụ isi nwere arụmọrụ ahaziri iche.
Na-anabata ma dị irè
Efu dị irè ma were ọsọ ọsọ
All akụkụ anyị na-ere na-gbaara
Biko hapụ ozi ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.
Abụọ 03, 2021